चरीकी ‘गर्लप्रेन्ड’ खुश्वु ओलीको प्रचण्डसँग यस्तो कनेक्सन -हेर्नुहोस – PathivaraOnline
Home > समाचार > चरीकी ‘गर्लप्रेन्ड’ खुश्वु ओलीको प्रचण्डसँग यस्तो कनेक्सन -हेर्नुहोस
चरीकी ‘गर्लप्रेन्ड’ खुश्वु ओलीको प्रचण्डसँग यस्तो कनेक्सन -हेर्नुहोस
admin April 27, 2018 April 27, 2018 समाचार 0
काठमाडौं । डन दिनेश अधिकारी चरीसँगको प्रेम सम्बन्धका कारण चर्चामा रहने गरेकी २००६ मिस टिन खुश्वु ओली आजभोली काठमाडौंमा छिन् । बेलामौका बेलायत जान्छिन् । र, बालबालिकाका लागि सेल्टर भन्ने एनजिओ चलाउँछिन् ।
०७१, २ साउनमा चरी इन्काउन्टरपछि बेलायत पुगेकी खुश्वु त्यति बेला ठूलो चर्चामा आइन् जतिबेला उनले चरीको गैरन्यायीक हत्या भएको शंखघोष गरिन् । ‘सेल्टर’ नामको एनजीओ चलाएकी खुश्वुले चरी हत्यामा उनका साथी मानिने अर्पण कोइराला र प्रहरी अधिकार इन्काउन्टर स्पेशलिष्ट कुमोद ढुङ्गेलको रणनीतिक योजना रहेको दाबी गरेकी थिइन् ।
चरीको इन्काउन्टर गर्दा ढुंगेल इन्स्पेक्टर थिए । नेपाल प्रहरीमा इन्काउन्टर स्पेसलिष्ट मानिने ढुंगेलले पछिल्लो पटक रुपन्देहीका डन मनोज पुनलाई पनि गोली ठोकेका थिए । याे समाचार अाजकाे नेपाल समाचारपत्रमा छापिएकाे छ ।
खुश्वुको राजनीतिक सम्बन्ध बलियो रहेको घटनाक्रमले देखाइरहेको छ । लन्डननिवासी सन्तोष कार्कीसँग विवाह गरिसकेकी खुश्वुले गएको माघमा मात्रै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेकी थिइन् । बालबालिकाको सुरक्षाको विषयलाई लिएर नै प्रचण्डसँग उनको भेट भएको थियो ।
एनजिओको सहयोगका लागि खुश्वुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि भेट गर्दै आएकी छन् । प्रधानमन्त्री ओलीसँग उनको समय–समयमा सम्पर्क समेत हुँदै आएको छ । अहिले सामान्य जीवन बिताउनका लागि मिडियामा नआएको बताउने खुश्वु चरी प्रकरणलाई सम्झन पनि चहान्न् ।
४ वर्ष अघि मारिएका डन चरीले खुश्वुको सेल्टरलाई सहयोग गर्दै आएका थिए । उनीहरूको चिनजान चरी मारिनु डेढ वर्ष अघि भएको थियो । खुश्वुले त्यसबेला एउटा अखबारलाई दिएको अन्तरवार्तामा नै यो स्वीकार गरेकी छन् । र, उनले भनेकी थिइन्,‘उहाँले मेरो सेल्टरलाई सहयोग गर्नु भएको छ ।’
परिवारले पनि चरीलाई मन पराएका कारण पारिवारिक सम्बन्ध रहेको उनले स्वीकारेकी थिइन् । लभ अफेयर नभएको दाबी गर्दै उनले आफुले चरीलाई मन पराउनेचाहीँ स्वीकारेकी थिइन् ।
साउनमा मारिएका चरीसँग उनले असोजमा इन्गेजमेन्टको तयारी गरेकी थिइन् । उनले चरीको अपराध कर्मलाई सत्कर्ममा बदल्न सकिने बताएकी थिइन् । रत्नाकर डाँकुसहित विश्वका कुख्यात अपराधी पनि सत्कर्ममा लागेको उदाहरण दिएर चरी सप्रिन थालेको उनले बताउँदै आएकी थिइन् ।
छोरा नभए आफु मरेपछि कृयापुत्री बस्ने कोही हुन्न भन्ने नेपाली समाजको रुढीवादी मान्यतालाई तोड्दै एक आठ वर्षिया बालिका… please अहिले सेयर गर्नुहोस अनि फुर्सद मा पढ्नुहोला!!!सबैले सेयर गर्नुहोला!!!!
काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञाको मोडालिटी यस्तो हुनेछ, यि क्षेत्र खुकुलो बनाइदै
बोलेरोले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा घटनास्थलमै गयो एकको ज्यान
यस्ती सुन्दरीलाई रत्नपार्कमा यौन धन्दा गर्न के बाधयता आइ पर्यो |भिडियो